बुटवल, २८ साउन । नेपालमा कोरोनाबाट आज मात्रै ६ जनाको मृत्यु भएको छ। जसमध्य कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा उपचाररत २ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोना लक्षण देखिएर अस्पतालमा भर्ना गरिएका कपिलवस्तुका २५ र ४२ वर्षीय पुरुषको गएराति मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएर यही साउन २५ गते भर्ना भएका कपिलवस्तुका ४२ वर्षिय पुरुषमा २५ गते नै पिसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो भने अर्का २५ वर्षीय पुरुषको पीसीआर रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ । दुवैजनालाई भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेको थियो ।
कपिलवस्तुका २५ वर्षीय युवालाई त्यहाँको अस्पतालले रिफर गरेर राति १२ बजे ल्याइएको थियो भने उपचारका क्रममा राती २ बजे मृत्यु भएको वताइएको छ ।
त्यस्तै यता, ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालमा थप एक कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ । प्राप्त जानकारी मृतक ती महिलामा मेनेन्जाइटिसको समस्या देखिएपछि यही साउन १८ गते अस्पतालमा भर्ना गरिएको उक्त अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. बिष्णुप्रसाद शर्माले दिएको जानकारी अनुसार जनकपुरकी ३८ वर्षिया महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो । उनलाई आइसीयूमा राखेरउपचार हुँदै आएकोमा गए राति १ बजे मृत्यु भएको डा. शर्माको भनाइ छ ।
यसैगरी कोरोना बाट मृत्यु हुनेमा काठमाडौं टेकुकी ७८ वर्षीया महिला पनि रहेकी छन्। ललितपुरको ग्वार्कोस्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएकी उक्त महिलाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
आइसीयुमा रहेकी महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । काठमाडौं टेकुकी ७८ वर्षीया महिलाको मंगलबार राति सवा १ बजे मृत्यु भएको हो अस्पतालले जनाएको छ। ती महिलाको (बुधबार बिहान) कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
उनलाई यही साउन २६ गते पाटन अस्पतालले किस्टमा रिफर गरेको थियो। उनमा ज्वरो, पखाला र वान्ताको समस्या देखिएको थियो ।
रेवान पोखराले रेष्टुरेण्टहरुमा काम गर्ने ६४ जनालाई राहत वितरण
दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको शीर्ष १० मा पुग्न सफल
साहित्यकार न्यौपानेको निधन